Switzerland oo ogalaaneysa kulamada dadka badan, xilli uu wali jiro Covid-19. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Switzerland oo ogalaaneysa kulamada dadka badan, xilli uu wali jiro Covid-19.
Switzerland oo ogalaaneysa kulamada dadka badan, xilli uu wali jiro Covid-19.
Isu imaatinka dad ka badan 1,000 qof ayaa la ogolaan doona dalka Switzerland, laga bilaabo maanta taas oo qayb ka ah qorshaha dowladda ee lagu qafiifinayo xayiraadaha saaran dalka ee lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka cudurka-19.
In kasta oo dadka laga helayo fayraskan ay sii kordhayso caalamka, haddana dowladda Switzerland ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dhacdooyinka dhaqanka iyo ciyaaraha la ogolaan doono inay sii socdaan, iyaddo laga taxadaraayo nadaafadda guud iyo xeerka kala fogaansha dadka.
Tan iyo bishii luulyo ee sanadkan waxaa kordhaayey kiisaska cudurka Covid-19 ee laga diwaan galinayey gudaha Switzerland, taas oo aan lamid ahayn sida dalalka France iyo Spain, qaar kamid ah goboladda dalka Swiss ayaa si weyn uga soo kabtay xanuunkan, iyadoo ay barbar socdeen in la furo dukaanada lagu iibiyo Af-xirka iyo in dib loogu laabto xarumaha kale ee ganacsiga.
Dowladdu waxay ku adkeysanaysaa tallooyinka in isu imaatinada ballaaran ee munaasabadaha inay sii socon karaan sida ciyaaraha kubadda cagta, ciyaaraha xeegadda barafka, riwaayadaha iyo bandhigyadda kala duwan, garoomadda saddex meelood labo meel ayaa loo ogolaanayaa taageerayaasha iyagoo xiran maaskaro ama waji xir.
Maamullada caafimaadka ee maxalliga ah ayaa mamnuici kara dhacdooyinka iyo munaasabadaha kala duwan haddi ay maleeyaan in halis weyn ay jirto, dowladda ayaa ku doodaysa kadib bilo xayiraado ah in dadka iyo dhaqaaluhuba u baahan yihiin inay kulamada caynkan ah.
Previous articleDuulimaadyadii tooska ahaa ee Uganda iyo Soomaaliya oo si rami ah dib u billowday.
Next articleMaxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku riday Askari lagu helay fal kufsi ah.